Varindi Vana vakapoteredza Chigaro chaMwari Chevushe
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Varindi Vana vakapoteredza Chigaro chaMwari Chevushe
Varindi Vana vakapoteredza Chigaro chaMwari Chevushe
VaHeberu 13:8 Jesu Kristu unogara akadaro zuro, nanhasi, nokusingaperi.
MARAKI 3:6 Nokuti ini JEHOVA handishanduki;
Mwari ane nzira yake pakuita kwake. Kuita uku kunoshanduka zvichienderana nezviitiko zviripo asi nzira yake yekutanga inoramba isina kushanduka.
Ngatitarisei varindi vana vemweya vakamira vakapoteredza chigaro chaMwari cheVushe. Mwari haadi ruchengetedzo rwevarindi ava asi vanhu vake vanoruda.
Zvipenyu izvi zvinomiririra kuita kwemweya kunoshandiswa naMwari kubata pamusoro pezviitiko zvinoshanduka apo Satani anoedza nzira itsva pakubata kwake pamusoro pevanhu vaMwari.
Denga ndiyo nzvimbo yepamusoro yezvemweya, saka hazvisi nyore kutsanangura vanhu vemweya ava nemaonero edu isu vanhu venyama.
MAPISAREMA 99:1 JEHOVA unobata vushe; vanhu ngavabvunde; iye ugere pakati pamakerubi; nyika ngaizununguswe.
Mwari ane makerubi (rudzi rwakasarudzika rwevatumwa kana kuti zvipenyu zvemweya) zvakamupoteredza.
Johane akakwira kudenga akaona Mwari agere pachigaro chake chevushe nezvipenyu zvina zvemweya zvakamupoteredza.
Basa ravo nderekuchengetedza nekukurudzira uye kutungamiririra vanhu vaMwari.
ZVAKAZARURWA 4:2 Pakarepo ndakava mumweya; tarira chigaro chovushe chakagadzwa kudenga, nomumwe agere pachigaro.
ZVAKAZARURWA 4:6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga panegungwa rakavonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe napamativi ose echigaro chovushe , pakanga panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
(“Meso” anomiririra ruzivo. Zvipenyu izvi zvakachenjera, zvizere nezivo.
“Mberi neshure”, zvinoziva zvinhu zvichauya nezvinhu zvakadarika.)
ZVAKAZARURWA 4:7 Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakafanana neshumba, chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakafanana nemhuru, chisikwa chipenyu chechitatu chakanga chinechiso chakaita sechomunhu, nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakafanana negondo rinobhururuka.
Zvakaoma kutsanangura vanhu vemudenga mumazwi edu anogarotsanangura vanhu venyama.
Johane aishandisa mifananidzo kutsanangura hunhu hwavo. Shumba ine simba. Mhuru inzombe duku yakasimba. Munhu ane ruzivo uye gondo rinomiririra maonero akadzama emweya anobva kudenga uye simba rekufamba pamusoro-soro munzvimbo dzedenga.
Kuita uku kudenga kwakaziviswa muTestamente Yekare.
EZEKIERI 1:1 Zvino negore ramakumi matatu, nomwedzi wechina, nezuva rechishanu romwedzi, ini ndiri pakati pavakatapwa parwizi rwaKebari, kudenga kwakazarurwa ndikavona zvandakaratidzwa zvaMwari.
EZEKIERI 1:4 Ndikatarira, ndikavona dutu remhepo richibva kurutivi rwokumusoro, riri gore guru rinomoto wairamba uchipenya, rakakomberedzwa nokubwinya, nomukati maro, imo mukati momoto, munechinhu chaipenya sedare.
(zviitiko izvi zvinoita sezvainyanya kutarisa zviitiko zvemukati)
5 Zvino mukati mazvo mukabuda zvakanga zvakaita sezvipenyu zvina. Zvakanga zvakadai, zvakanga zvakafanana nomunhu;
EZEKIERI 1:10 Kana zviri zviso zvazvo pakuvonekwa kwazvo, zvaive nechiso chomunhu, zvose zviri zvina zvaive nechiso cheshumba kurutivi rworudyi, zvose zviri zvina zvaive nechiso chenzombe kurutivi rweruboshwe; zvose zviri zvina zvaive nechiso chegondo vo.
Chiso chegondo hachisi kuruboshwe kana kurudyi, kana pasi, saka chinoita sechiri pamusoro.
EZEKIERI 10:20 Ndicho chipenyu chandakavona panyasi paMwari waIsraeri parwizi rwaKebari; ndikaziva kuti makerubi.
EZEKIERI 10:14 Rimwe nerimwe rakanga riine zviso zvina: chiso chekutanga chakanga chiri chiso chekerubi, chiso chechipiri chakanga chiri chiso chomunhu; chechitatu chiso cheshumba, nechechina chiso chegondo.
Dhonza rinodaidzwa zvakare kuti mhuru (nzombe duku) muchiratidzo ichi rakaonekwa riri mutumwa. Hatina chokwadi chekuti mutumwa anoratidzika zvakadii.
Chiratidzo chaEzekieri chekuTestamente yekare chairatidza chisikwa chimwe nechimwe chiri mubatanidzwa wehunhu huna hwazvo zvese pamweya.
Rangarirai vana veIsraeri vakasvitswa kunyika yavo yechipikirwa.
Saka Mwari akashandisa hunhu huna uhu pamwechete kuti avatungamirire nekuvachengetedza munhoroondo yavo.
Maporofita nemaonero avo akadzama seegondo vairamba vachiuya panzvimbo vachitaura nevana vaIsraeri vachivaudza Shoko raMwari nekuvaratidza nzira.
Mhuru / nzombe rinoreva zvinhu zviviri. Mhuru inogara iri pedyo nedzimwe mombe, inotevera gwara rimwechete iroro hairasiki kubva pashoko rakaziviswa nevaporofita. Dhonza sesimba rehondo dzavo, pavanobatira Mwari, rinodzingira kure vavengi.
Ruzivo runobva kumaPisarema aDavidi neZvirevo zvaSoromoni rwaifambirana nerunako ruri muzvinyorwa zvaIsaya, kutenda kwakasimba uye kwakakwana kwaJobo pachiso chekuparadzwa kusina magumo, nemuwono wakadzama uri kuna Genesisi, kureva zvishoma zvemoto uri muruzivo rwemaJuda.
Zvino kwaive nehukuru, simba raMwari rakaita sereshumba rakazarura Gungwa Dzvuku, rakatonhodza gomba remoto, rakauraya vaAsiria 185 000 muhusiku humwe kuti Jerusarema riponeswe uye kuti Cyrusi muPesia asunungure maJuda kubva muhutapwa hwekuBabironi.
Zviratidzo zveTestamente Itsva yaJohane zvakaona zvisikwa zvipenyu zvina sezvisikwa zvakasiyana.
Zvinoita sekuti kereke muTestamente Itsva yakafamba nezvikamu zvakasiyana munhoroondo yayo zvakaita kuti hunhu hwega hwega hutsanangurwe nguva yakasiyana. Kereke yevaHedheni yakapararira nepasi rese ikatarisana nezvikamu zvakasiyana zvenhorondo yevanhu.
Kereke yekutanga yaisimbirira pamweya weShumba yaJuda, chokwadi pamusoro paJesu ari Shoko raMwari rakanyorwa pasi nevapositora nevanyori veTestamente Itsva. Kereke yekutanga yaitenda mune zvakanyorwa nevapositora chete.
Mumashure mekanzuru yeNicean yemuna 325 AD kereke yakamanikidzwa kutambira dzidziso dzaive dzisina kunyorwa muBhaibheri. Kukakavadzana pamusoro pehuMwari kwakaita kuti maKristu vatange kuuraya mamwe maKristu. Chero gakava riri pamusoro pechitendero rakatanga kururamiswa nehumhondi. Makumi emamiriyoni evanhu akafa mukati meNguva dzeRima idzi nedzakatevera. Kurwadziwa uku kwakasangana nemaKristu aive achisimbiswa nemweya wenzombe rinomiririra mhuka inozvarirwa kubata basa yozouraiwa.
Zvino Mwari akabva atanga kuropafadza ruzivo rwevanhu nekukasika kwerumutsiridzo mumakore akapoteredza 1400. Kudhinda mabhuku kwakatanga munana 1440 saka vanhu vakatanga kukwanisa kuita maBhaibheri. Kudhindwa kwemaBhaibheri nezvimwe zvinyorwa kwakaita kuti Rumutsiridzo rutange makore anana 1500 achangodarika sezvo dzidziso dzevamutsiridzi dzakakwanisa kubva dzapararira nekukasika. Mwari akaropafadza zvikoro zvevanhu nezivo. Vezveati vane zvipo, vanyori, vaimbi nevadzidzi vakatanga kuwanikwa pakati pevanhu. Rudo rwekudzidza rwakapararira zvakaona Martin Luther muGermany achitanga kudzosa dzidziso yeruponeso runobva pakutenda muna Jesu Kristu. Vamutsiridzi vaishandisa ruzivo rwevanhu nezvikoro kuti vatange Rumutsiridzo kuti vadzose maKristu kuBhaibheri pachinzvimbo chekungotevera tsika dzekereke. Muna 1610 Bhaibheri reKing James rakanyorwa raive hukuru hwehunyanzvi hwechitauro cheChirungu muzvinyorwa. Izvi ndizvo zvakabva zvava mbambo dzekupararira kwechiKristu.
Vanhu vakatanga kuita zivo dzavo dzezvesainzi nezvemigodhi zvakatanga munana 1760. zvikepe zvemarasha zvaikwanisa kufamba kutenderera pasi rese zvekuti vanhu vakatanga kukwanisa kuenda kune nyika dzemhiri kwemakungwa. Zvitima nenjanji zvakazarura munyika zhinjhi zvikaita kuti vanhu vagone kufamba mukati menyika. Iyi ndiyo zvakare yaive nguva apo mumutsiridzi mukuru John Wesley, kuEngland, achishandisa zivo yevanhu yakafemerwa naMwari akatanga kuparidza hutsvene uye rudo kuhama munaShe. Wesley akasiyana nezvematongerwo enyika akaponesa England kubva pakutapwa neFrance. Ipapo kuparidzira kwaWesley kwakakura kuva nguva yemamishinari huru yakatanga gore ra 1800 rave kuda kusvika. Ruzivo rwevanhu rwakatora Bhaibheri kutenderera naro pasi rese rikatendeutsa mahedheni.
1900 achangopfuura Mwari akatanga kusimudza Pentecositi muAmerica nguva yakaona rubapatidzo rweMweya Mutsvene ruchidzoserwa kukereke.
Izvi zvaiita kunge gondo rinobhururuka.
MaKristu akava munzvimbo dzepamusoro dzemweya dzezvipo nemabasa. Panguva iyi ruzivo rwevanhu rwakawedzera vakatanga kugadzira mainjini zvakaita kuti kuve nemotokari nendege.
Simba remagetsi rakaitwa. Zvino zivo yesainzi netekinoroji yakakurisa apo maatomi akaburitsa zvakavanzika zvawo zvakaita kuti kuitwe makomputa, mabhomba enyukiriya, indaneti, nembozha nhare.
Nguva yekuwanda kwezivo yakatirova sedutu reshanduko huru. Tese tinofanira kudzidza, kurasa zvatakadzidza nekudzidzazve zvimwe sezvo zivo ichishandura nzira yatinofunga nayo uye yatinoita nayo zvinhu.
Asi chinhu chimwechete chaive chisati chazadziswa. Zivo yesainzi yakazivisa zvakavanzika zveatomi ikakura nekukasika kubva pakupera kwehondo yepasi rese yekutanga, saka kunzwisisa kwedu kweBhaibheri kwakaramba kuri kushoma sezvo tisingagoni kuvhura zvakavanzika zvaro zvakakosha. Nhasi uno tinoziva zvishoma kukunda vadzidzi vaidzidza Bhaibheri muna 1920. Zvakavanzika zvakawanda muBhaibheri zvakasara zvisina kutsanangurwa. Zviratidzo zvechiporofita zvakawanda zvaingoitwa zvekufungidzirwa. Ruzivo rweBhaibheri rwakawedzera kubva kuna Luther akadzosera kururamisira nekutenda kuenda kuna Wesley akasimbirira kurarama muhutsvene, veBaptist vakadzosa kunyikwa mumvura kwakazara panobapatidzwa munhu nevePentecositi vakadzosera zvipo zvemweya nerubapatidzo rweMweya Mutsvene. Asi hatina zvakawanda zvatakunda pakugadzirisa gakava pamusoro peBhaibheri nezvakavanzika zvaivepo pakupera kwehondo yepasi rese yekutanga.
Ruzivo rwesainzi rwava pamusoro kunge gondo. Ruzivo pamusoro peBhaibheri rwunokambaira ruchitevera zvishoma.
Muono wakadzama seweziso regondo waidiwa kuti utsanangure zvakavanzika zvaMwari.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaprofita.
Ruzivo rwedu pamusoro pehuMwari runoramba rwakavharirwa mukufunga kweNguva yeRima. Vezivo venguva iyoyo vakatadza kuwana zita rimwechete reVanhu vatatu vavaitenda kuti vaiita huMwari. Saka vakatapa zita raMwari nekuriisa pazvinzvimbo zvitatu Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Masenturi anokwana gumi nematanhatu adarika makereke haasati agona kugadzirisa chakavanzika ichi.
Saka nei tichiramba tiri pachidanho chavo chezivo yeNguva yeRima uye nei tichitsanangura Mwari wedu tichishandisa pfungwa dzavo dzisimo muBhaibheri dzakaita sekuti “Munhu Wechipiri muhuMwari”, “Vanhu Vatatu muhuMwari”, “Mumwe-muvatatu”, “Vatatu mumwe”, “Baba neMwanakomana vakafanana” nezvimwewo.
Billy Graham, mumwe wevavhangeri vakuru, akabvuma kuti Tiriniti chinhu chakavanzika.
Saka tinoda kusvika kwemutumwa wechinomwe kana nhume kuti ipedzise zvakavanzika zvaMwari.
Tinoda muonero wakadzama wegondo kuti tijekese muonero wedu wakaneta uye wakarasika pamusoro pechivi chekutanga. Semuenzaniso nei Mwari asina kuudza Adamu naEva kuti vatendeuke? Nei ropa remhuka rairipira zvivi? Tinoziva kuti ichokwadi, asi hatigoni kutsanangura kuti nei Mwari aida izvozvo.
Nei Eva akarwadziswa pakuzvara mwana? Nei muripo wake waive uri wekubata mimba kakawanda? Kubata mimba kupi? Kana aifanira kuwedzera nekuzadza nyika aizofanira kubata mimba kakawanda.
Nezvimwe zvese zvatisina kujekerwa nazvo zvatinongosiyana nazvo nekurega kuzvitaura.
Tichiri kutambudzika kutsanangura kuti nei vazivi vakapinda mumba kwete muchidyiro. Vakaona mwana muduku, kwete rusvava. Asi hakuna munhu anoita seanoda kubvumirana nekutaura uku sekunge kune kuita kwerunyararo kwakakonzereswa nekutya kusawirirana mumakereke.
Pavakauya nemukadzi aive atadza kuna Jesu nekuti vaida kumuuraya, akavatarisa akanyora muvhu nechigunwe chake, kaviri. Akaitirei izvi? Tichakwanisa rini kuziva zvinhu izvi?
Mune miono mizhinji mune zviitiko zvesainzi. Asi kune miono mishoma kwazvo mumakakava uye mune zvakavanzika zvashungurudza maKristu kwenguva refu.
MATEO 17:11 Jesu akapindura akati, Eria uchavuya hake avandudze zvinhu zvose.
Apa Jesu aireva Eria aizouya munguva yaiuya.
Jesu aive asingatauri pamusoro paJohane Mubapatidzi. Johane aive avurawa hushumiri hwake hwaive hwatove munguva yakadarika.
Johane Mubhabhatidzi haana chaakavandudza. Akazivisa dzidziso itsva yerubapatidzo. Akazozivisa Mesiah kuvanhu.
Izvi zvose zvaive zvitsva uye zvichiunza shanduko.
Kereke yekutanga, iri pasi pehutungamiriri hwemapositora yaive nechokwadi. Asi chokwadi ichi chakazorasika mukati menguva yerima. Vamutsiridzi vakaita saLuther, Wesley nevePentecositi ndivo vakazotangazve kudzosa maKristu kuBhaibheri. Asi ruzivo rwevanhu nedzidzo hazvina kukwanira pakutsanangura zvakavanzika zvese zveBhaibheri.
Zvinoda kuti Mwari vatumire mweya wegondo nekujekesa kwawo zvinhu apo vamwe vanenge vachingoona vachidzimirwa vozvisiya vachiti hazvina kukosha.
Johane Mubapatidzi akanongedzera Jesu seMunhu achifamba pakati pevanhu. Isu tinoda Eria akavimbiswa kuti atinongedzerere Jese achifamba nemapeji eBhaibheri. Ndiwo mweya wegondo rinobhururuka neziso raro rinoshamisa pazvinhu wakavimbiswa naMwari munguva yekupedzisira nyenhorondo yekereke.
Tinofanirwa kubudisa zvinhu zvatakadzidza kare zvisingatsigirwi neMagwaro. Zvino todzidza zvimwe zvinhu zviri nani zvinobva muBhaibheri.
Kana tisingagoni kusiya zvinhu nekudzidza zvitsva, sezvatinoita mumabasa, tichapesana nezaruriro yezvinhu zvinotaurwa neMagwaro togara nezvinhu zvatakadzidza kubva kuchinyakare. Chingofungai kuti tingadai tiri papi dai ruzivo rwesainzi rwakaramba rwuri pachidanho chemainjini emarasha.
Kana tichifunga kuti tinoziva zvese uye hatidi kugadziriswa, takarasikirwa uye tinokwanisa kusiiwa.
EZEKIERI 10:10 Pakuonekwa kwawo ose ari mana akanga akafanana, zvakaita segumbo rimwe rengoro mukati merimwe gumbo rengoro.
EZEKIERI 1:16 makumbo awo pakuonekwa kwawo nomuitirwo wawo zvakanga zvakafanana neberiri; ose ari mana akanga akafanana pakuwonekwa kwawo nepamuitirwo wawo zvakanga zvakaita segumbo rimwe riri mukati merimwe gumbo.
Chisikwa chemweya ichi chaitarisisa zvinhu zvemukati kukunda zvekunze. Kune gumbo rakadzama mukati megumbo raionekwa.
Pane muono wakadzama wakavanzwa kumashure kwechinhu chaicho chatinoona.
Tinofanira kutsanangura chokwadi cheMagwaro nekutsigira nechokwadi chakadzama chakavanzwa muMagwaro.
Semuenzaniso, tabernakari yemaJuda yaive neruzhowa rwakaipoteredza nemusuwo mumwechete.
Kupinda nemusuwo uyu kwaisvitsa munhu paaritari yezvibairo apo chipiriso chake chekururamisa chaibaiwa chopiswa.
Zvino kwaizoita dziva remvura rekusukira pamusoro paizvozvo kwaive nenzvimbo tsvene yaive yakaitwa nemudziyo wemuti uye wakafukidzwa nejira nematehwe. (Mufananidzo uyu unoratidza jira serakadhonzwa kuti mudziyo wemuti uonekwe.)
Nekuda kwei iyi iri nzira yaidiwa naMwari kuti ive muTestamente Yekare?
Nekuti ndiwo mafambiro anoita rudzikinuro rweTestamente Itsva.
Kune musuwo mumwechete wekupinda Kudenga, Jesu Kristu.
JOHANE 10:7 Zvino Jesu akati kwavari zve: zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri: ndini mukova wamakwai.
Tarirai kuti Petro akazivisa sei ruponeso kuvanhu vese pazuva rePentecositi.
MABASA AVAAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari tendevukai mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
“Tendevukai”. Ropa raJesu, chibairo chedu chisina mhaka, rakadeuka kuti risuke zvivi zvedu.
“mubapatidzwe mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu”. Kusukwa mudziva.
“mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene”. Kupinda munzvimbo tsvene.
MABASA AVAAPOSTORA 2:39 Nokuti chipikirwa ndechenyu, navana venyu, navose vari kure vanozodanwa naShe, Mwari wedu.
Hakuna imwe nzira ingazogamuchirwa naMwari.
Gwaro rakanyorwa rega rega rinopinda mumufananidzo wakadzama, serukova runoyerera ruchipinda murwizi.
Tinokwanisa chete kutsanangura Magwaro kana tichikwanisa kuratidza kuti anoratidzira sei chokwadi chakadzama cheMuono Mukuru waMwari.
Bhuku raMabasa avapositora ndiwo Mabasa eMweya Mutsvene mukereke. Kana bhuku iri richimiririra Mwari ari pabasa saka panofanira kuva nevarindi vana vakachengetedza Bhuku raMabasa avapositora.
Varindi ava ndiwo mabhuku mana eEvangeri ekutanga eTestamente Itsva.
Mateo rinomiririra Kristu seShumba yerudzi rwaJuda, Mambo wemaJuda.
Marko rinomumiririra ari nzombe inobata mabasa anorema yakazobaiwa.
Ruka rinomumiririra ari Munhu, munhu ane muenzaniso watinofanira kutevera paruzivo rwevanhu.
Johane rinomumiririra seMweya waMwari, Gondo guru rinobhururuka nekuona kwake kunoshamisa nemasimba anoshamisa.
Evhangeri remaBhuku mana aya rinoita nheyo pamusoro padzo Mwari anotanga kuvakira kereke yake mukati memakore 2000 enguva dzemakereke dzaizouya. Kereke yakura kuva muviri waKristu mukati menguva dzemakereke apa yava pachikamu chemutsipa, takamirira musoro wedu kuti uuye kunova kudzoka kwaShe Jesu Kristu.
MuTestamente Yekare Mwari aive nemadzitateguru mana senheyo dzekereke yake yemaJuda. Abrahama (kutenda) Isaka (rudo) Jakobo (tsitsi) Josefa (kururama). Kwapfuura makore anokwana 2000 akavaka kereke yemaJuda. Kereke yemaJuda yaive yava pachikamu chemutsipa yakamiririra musoro wayo pakauya Johane Mubapatidzi. Pakagurwa musoro wake, mutumbi wake wakamiririra kereke yechiJuda. Asi pachinzvimbo chekugamuchira Musoro wavo, Jesu , maJuda vakamuramba. Saka akabva atangidza patsva kuvaka kereke yevemarudzi mukati memakore 2000 aitevera.
Nei maBhuku mana eEvangeri? Mabhuku mana eEvangeri anotiudza nyaya yepamuchinjiko.
Kubva pamuchinjiko tinokwanisa kunyora chiverengo chechina (4). Kana kunyora moyo.
Saka maBhuku mana eEvhangeri anomiririra moyo wehurongwa hwaMwari pamusoro perudzi rwevanhu.
Kana mukatendeuka mukagamuchira Kristu mumoyo yenyu,
Zvikamu zvina zvemakamuri emoyo zvinomiririra zvipenyu zvina zvinorarama zvakapoteredza chigaro chaMwari.
Saka Moyo wako unova chigaro chaMwari kana wazvarwa patsva iye orarama mukati mako.
ZVAKAZARURWA 4:4 Kwakanga kunezvigaro zvoushe zvinamakumi maviri nezvina zvakanga zvakakomberedza chigaro chovushe; napazvigaro pakanga pagere vakuru vanamakumi maviri navana; vakanga vanekorona dzendarama pamisoro yavo.
ZVAKAZARURWA 5:6 Zvino ndakavona pakati pechigaro chovushe nezvisikwa zvipenyu zvina, napakati paVakuru, Gwaiana rimire, rakaita serakabaiwa,
Gwaiana, Jesu, aive pakati pechigaro chevushe. Zvisikwa zvipenyu zvina zvaive zvakapoteredza chigaro chovushe. Vakuru makumi maviri navana (madzitateguru gumi nemaviri kubva kuTestamente Yekare kwavari kwakabva mazita emarudzi gumi nemaviri emaJuda, uye vadzidzi gumi nevaviri kubva muTestamente Itsva uko Pauro akatsiva Judasi) ndivo vamwe vakaita rimwe ndenderedzwa rakapoteredza chigaro chovushe.
Mumbabvu dzemunhu mune mbabvu gumi dzakabatana uye mbiri dziri padzo dzega kwese kurudyi nekuruboshwe. Saka mukadzisanganisa dzinoita makumi maviri neina dzinomiririra Vakuru makumi maviri nevana.
Saka Jesu paanogara mumoyo yenyu akakomberedzwa nemakamuri mana emoyo nembabvu makumi maviri neina. Izvi zvinoratidza zvakakwana mamiriro akaita chigaro chake chevushe kudenga.
Saka panyika hapasisina nzvimbo tsvene inogara Mwari. Mukuru wemauto ekuRoma Titus akaparadza Temberi yaigara Mwari munguva yeTestamente Yekare. Mwari ega ndiye Mutsvene. Saka kana akararama muTemberi ndiyo yaive nzvimbo Yake tsvene.
Saka parizvino nzvimbo inorarama Mwari iri mukati memoyo yevanhu. Pachinzvimbo chekurarama munzvimbo tsvene, ave kurarama mumoyo yevanhu vatsvene. Munhu mumwe nemumwe akazvarwa patsva anobva ava ibwe rinorarama muTemberi huru yaMwari yemweya yeTestamente Itsva yaakavaka mukati memakore 2 000 adarika.
Ropa rinoyerera mukamuri yekutanga yemoyo richibva mumuviri. Rinobva rapinda mukamuri yechipiri marinoenda kumapapu kunotora mweya wakachena wekufema. Ropa iri rinobva rapinda mukamuri yechitatu.
Saka ropa rinobva mumuviri rinoyerera richipinda mukamuri yekutanga neyechitatu.
MaBhuku mana eIvhangeri ndiwo moyo weBhaibheri.
Mateo chaputa yekutanga ine dzinza reropa raMambo Jesu rakarondwa kubva kuna mambo Davidi, mambo wemaJuda ane mbiri, uye kubva kuna Abrahama akasangana naMambo Merkizedeki.
Ruka chaputa yechitatu ine rudzi rweropa remunhu akarurama kana kuti munhu Jesu rakarondwa kubva kuna Adamu, aive munhu wekutanga akarurama kusvikira paakazoita chivi. Jesu, munhu akarurama saAdamu, akauya kuzobvisa kutadza kwakaitwa nemunhu wekutanga Adamu.
MaBhuku Marko naJohane haana kuronda dzinza reropa. Nei?
Kutora makamuri mana nenzira imwechete yakarongwa zvisikwa zvipenyu zvina.
Marko rinomiririra Jesu seDhonza, muranda kurudzi rwevanhu akatakura zvivi zvedu akaenda nazvo kure akazvisiira Satani muhadhesi.
Varanda vanotorwa chete kuti vaite basa kana vachirikwanisa. Hakuna anovabvunza kuti madzitateguru avo ndivanani.
Johane rinomiririra Jesu saMwari, Mweya Mutsvene mukuru unomiririrwa neGondo rinobhururuka. Mweya waMwari hauna dzinza rawakabva nekuti ndiye Mweya unogara nekusingaperi.
Saka Jesu ane masimba asingagoneki uye hushumiri husingatsananguriki zvose mumunhu mumwechete.
NdiMambo asi achiita seMuranda kuti atakure mitoro yedu uye kugadzirisa matambudziko edu. Saka ari pamusoro pedu uye pasi pedu panguva imwechete. Anotiudza kuti toita sei saMambo asi nemufaro achitiitira zvatinoda uye kutiriritira seMuranda akazvipira kana Muchengeti.
Ndiye zvakare munhu akarurama (panyama Yake) asi panguva imwechete ndiMwari (nekuda kweMweya unoshamisa unorarama Maari). SeMunhu anotinzwira nekutinzwisisa nekutibatsira asi saMwari anoda kuti tive vakarurama uye haangadzikisiri hwaro hwake. Kuti Munhu uyu anokwanisa kuva Mwari zvinokanganisa mafungiro. Asi achizviita zvakadaro.
Saka basa redu pahurongwa hwedzikinuro nderekumudaidza kuti apinde mumoyo yedu zvichibva pakuzvisarudzira tega.
Zvino, kana tiine njere, tinobva tazviramba kwaari kuti titongwe nekuda kwake, kwete kuda kwedu.
Kana tikagona kuita izvi, zvino Wemasimba ose uyu anokwanisa kuita zvisingagoneke, anobva atonga hupenyu hwedu otiita kuti tive chikamu cheMufananidzo wake Mukuru unova zano rake guru rekuponesa rudzi rwevanhu.
NaJesu achitonga hupenyu hwedu, tinova vanhu vaanoda kuti tive.
Kana tiri chikamu cheMuviri Wake, zvino varindi vana ava vanozochengetedza nesuwo. Iyi ipfungwa inofadza.
Mwari haashandure nzira yake huru yaanobata nayo.
Mwari anoshandisa Bhuku raGenesisi sechaputa yake yembeu. Dzidziso yake yose inotangira apa sembeu iri kumera yokura apo anofambisa zvose zvaakaita muBhaibheri kusvikira paberekwa ruva kuBhuku raZvakazarurwa.
Saka kana Mwari aine varindi vana vakamukomberedza kuna Ezekieri naZvakazarurwa, varindi ava vaive kupi kuna Genesisi?
GENESISI 3:24 Naizvozvo akadzinga munhu akaisa makerubi kurutivi rwamabvazuva rwomunda weEdeni, nomurazvo womunondo waimonereka kumativi ose, kurindira nzira yomuti wovupenyu.
Makerubi vatumwa vakasarudzika vakakomberedza Mwari.
II MADZIMAMBO 19:15 Ipapo Hezekia akanyengetera pamberi paJEHOVA akati: Haiwa! Mwari waIsraeri Iye ugere pamusoro pamakerubi,
MuEdeni makerubi aya aive akapoteredza muti wevupenyu. Uyu hausi mutiwo zvawo sezvo tisingakwanisi kuwana hupenyu husingagumi nekudya muchero. Chinhu chinorarama zvenguva yakarebesesa muti, muti webristlecone pine wekuAmerica, wakararama kwemakore anosvika 4500. saka Mwari akashandisa muti, chinhu chinorarama zvenguva yakarebesa chinobatika sechiratidzo chehupenyu husingagumi.
I JOHANE 5:11 Kupupura ndiko, kuti Mwari wakatipa vupenyu bwusingaperi; zvino vupenyu ubwu bwuri muMwanakomana wake.
Hupenyu husingaperi hunobva chete kuna Jesu Kristu.
GENESISI 3:22 JEHOVA Mwari akati: Tarirai Munhu wava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa; zvinozvimwe ungatambanudza ruvoko rwake akatoravo zvomuti wovupenyu, akadya, akararama nokusingaperi.
Adamu aikwanisa kuzowana hupenyu husingaperi kubva pamuti wehupenyu. Saka muti wehupenyu waifanira kuva Jesu.
Saka muEdeni, maive nemakerubi akamira akapoteredza Mweya waKristu, aive muti wehupenyu (husingaperi).
GENESISI 3:24 Naizvozvo akadzinga munhu, akaisa makerubi kurutivi rwamabvazuva rwomunda weEdeni, nomurazvo womunondo waimonereka kumativi ose, kurindira nzira yomuti wovupenyu.
Waikwanisa kumonerekera mativi mana chete, kuchamhembe, mabvazuva, maodzanyemba nemadokero. Saka kwaifanira kuva nemakerubi mana akachengetedza nzira ina idzi. Saka makerubi mana, achibata sevarindi, aive amire akapoteredza Mweya waMwari muEdeni. Iri raive ragara riri zano raMwari.
“Kurindira nzira yomuti wovupenyu”. Mutiwo zvawo unogara panzvimbo imwechete saka hauna nzira, zvinomiririra kufamba famba. Muti wehupenyu waive uri pakati pemunda reEdeni apa waive wava kumabvazuva kwebindu , saka waive wafamba. Kristu ndiye aive tsime rekuyevedza kweEdeni. Zvino aive abva aenda kumabvazuva kwemunda kuti ave mukova kuitira kuti munhu aive atadza agone kudzoka pachinzvimbo chake chokutanga. Iyi ndiyo nzira inoshandiswa naJesu. Anoita nzira yekubuda nayo kubva muhadhesi kuti isu vatadzi tigone kudzoka kuparadhiso.
JOHANE 14:6 Jesu akati kwaari: Ndini nzira nezvokwadi novupenyu; hapanomunhu unovuya kunaBaba asi nokwandiri.
Jesu oga ndiye ane nzira yekutiponesa. Hakunomumwe anogona kuzviita.
MuTestamente yekare kwaive nemunondo unopfuta waikuuraya kana ukada kusvika pana Mwari. Munondo uyu waimiririra kutsamwa kwaMwari achirwisa zvivi uye zvido zvemurairo saka munhu wese aitadza aifanirawo kufa. Mwari haazorege chivi chichirarama pamberi pake.
EZEKIERI 18:20 Mweya unotadza ndiwo uchafa;
Kunyangwe vanhu vemuTestamente yekare vaitya kusvika pedyo naMwari nekuda kwemunondo iwoyo waizouraya vatadzi. Vanhu vose vanotadza. Saka Mwari aizogara akavanda kuseri kwechidzitiro kana jira remunzvimbo tsvene.
Chii chakaitika kumunondo wakaipisisa uyu?
Pakafa Jesu paCalvari akasarudza kutakura zvivi zvedu pamusoro pake. Saka Mwari akabva adurura kutsamwa kwake neshungu dzake dzese pana Kristu kusvikira Jesu aripira zvakazara zvivi zvedu zvese. Mumazuva akare munhu airwa nemunondo kana arwa kurwa kwake kwekupedzisira akafa, vaibaira munondo wake, kunopinza kwawo kwakanongedza pasi, muvhu semucherechedzo paguva rake.
Munondo uyu waizoita sechiratidzo chemuchinjiko.
Saka muchinjiko unoratidzira munondo nekunopinza kwawo kwakabairwa muvhu. Zvinoreva kuti hondo yapera uye hapachina kurwa zvakare. Mwari akafara nekufa kwaJesu nekuti Aive aripira zvakazara muripo wezvivi zvedu zvose. Saka Mwari aive asisina chekuita nezvivi zvevatadzi vaive vatendeuka. Muripo waive wabhadharwa, hondo yaive yapera.
Muchinjiko unomiririra munondo wekutsamwa kukuru wakabairwa muvhu.
Moto waive pai paCalvari? Kuna Genesisi waifanira kuva “munondo unopfuta”.
Mwari aivepi pakafa Jesu? Aive munaKristu.
II VAKORINTE 5:19 Ndiko kuti Mwari wakanga achiyananisa nyika naye muna Kristu,
VAROMA 5:10 Nokuti zvatakayananiswa naMwari nokufa kwoMwanakomana wake,
Mweya Mutsvene waive Maari, asi usingatauri naye.
ISAIAH 59:2 Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu, zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake, kuti arege kunzwa.
Mweya unoshamisa wairarama muna Kristu waisada kutaurirana nehumunhu hwake. SeMunhu, Jesu akanzwa kunge araswa naMwari. Kana ukafuratira munhu ukaramba kutaura naye, munokwanisa kuva mukamuri imwe mese asi anenge achinzwa kunge akarambwa uye akatukwa newe.
Mweya Mutsvene waive muna Jesu ndiwo waive moto unopfuta wakapisa zvivi ukakunda kurwa pakati pake naSatani.
Moto unokwanisa chete kubuda kubva pachinhu nekuparadza chinhu ichocho pachinotsva.
Saka Jesu aifanira kufa kuti aburitse moto weMweya Mutsvene wakadzoka kuvadzidzi vake pazuva rePentecositi.
Mwari haafi. Rufu kuparadzana kwemweya nenyama. Saka Mweya mutsvene waMwari wakakunda kurwa naSatani mumuviri waJesu waiva waneteswa. Mweya wakabva wabuda mumuviri waJesu. Saka Mwari haana kufa. Jesu Munhu ndiye akafa pakabuda Mweya waMwari maari.
Jesu paakaturikwa pamuchinjiko, varindi vana vaive vakamupoteredza ndivanani?
Kwaive nevarwi vechiRoma vana. Kunyangwe Roma yaive muvengi waMwari, Mwari akaita kuti mauto mana ekuRoma amire kumativi mana emuchinjiko. Nei? Kuti aite kuti zano rake rirambe rakabatana uye kuti ataridze kuti ane simba kunyange pamusoro pevavengi vake.
JOHANE 19:23 Zvino varwi vakati varovera Jesu, pamuchinjikwa, vakatora nguvo dzake, vakaita migove mina, murwi mumwe nemumwe mugove wake;
Varwi vekuroma pavaifunga kuti vaiparadza hurongwa hwaMwari, vaitozadzisa hurongwa hwaMwari.
Ndizvo zvinoita simba raMwari. Chero vavengi vake vanobata basa rake.
MuTestamente Yekare vaIsraeri, pavaifamba murenje vachienda kunyika yechipikirwa, vaizoita matumba akagadzirwa nenzira yevarwi vehondo.
Terbanekari yaive pakati. Marudzi matatu aive ari kumabvazuva, matatu kumawodzanyemba, matatu kumadokero uye matatu kuchamhembe.
Marudzi mana chete ndiwo aive nemireza.
Kumazuva akwaive kusina wairesi kana mbozhanhare, vakuru vaisimudza mureza wakanyorwa chidawo cherudzi rwavo pauri. Ipapo vateveri vavo vaizoona kuti nderupi rutivi rwavaifanira kutevera nekugara pamwe narwo vobva varovera matende avo. Saka marudzi gumi nemaviri vaigara vakapoteredza tabernekari yavo.
MuBhuku raNumeri raiisa maJuda muzvikwata zvemarudzi matatu kumabvazuva, chambembe madokero uye maodzanyemba etabernekari.
Chikwata chimwe nechimwe chemarudzi matatu chaive nemureza mumwechete. Saka marudzi gumi nemaviri aive nemireza mina yaive yakasimudzwa yakakomberedza tabernekari.
NUMERI 2:3 Vanodzika kurutivi rwamabvazuva, nokunobuda zuva nako, vanofanira kuva vomireza yemisasa yaJuda, namapoka avo;
NUMERI 2:5 Vanodzika kurutivi rwavo vanofanira kuva verudzi rwaIsaka:
NUMERI 2:7 Novorudzi rwaZeburuni;
NUMERI 2:10 Kurutivi rwezasi ndiko kunofanira kuva nomureza wemisasa yaRubeni, namapoka avo.
NUMERI 2:12 Rudzi rwaSimeoni ndivo vanofanira kudzika kurutivi rwake;
NUMERI 2:14 Norudzi rwaGadi:
NUMERI 2:18 Kurutivi rwamavirazuva kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaEfraimi, namapoka avo
NUMERI 2:20 Rudzi rwaManase vanofanira kudzika kurutivi rwavo:
NUMERI 2:22 Norudzi rwaBenjamini:
NUMERI 2:25 Kurutivi rwokumusoro kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaDani, namapoka avo:
NUMERI 2:27 Rudzi rwaAsheri ndivo vanofanira kudzika kurutivi rwavo:
NUMERI 2:29 Norudzi rwaNaftari:
Hurongwa uhu hunotipa muono unofadza wakadzama pahutungamiriri hwevanhu.
Mureza waJuda waive shumba, mambo wezvipenyu, chiratidzo chesimba chakanakisa uye chikuru kwazvo.
GENESISI 49:9 Juda mwana weshumba:
Shumba yerudzi rwaJuda ndiJesu. Ndiye ega munhu anotungamirira watingavimba naye pamasimba. Simba rinopera nekun'ora zviri nyore. Hutungamiriri hwevanhu hunokundwa nekutadza zviri nyore.
JEREMIA 10:23 Haiwa JEHOVA ndinoziva kuti nzira yomunhu haizi yake amene: munhu, unofamba, haagoni kururamisa nhanho dzake.
Jesu Kristu, Shoko raMwari, ndiro roga mutungamiriri anokwanisa kubata simba risingakanganisi.
ZVAKAZARURWA 5:5 Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri; usachene hako, tarira, Shumba yorudzi rwaJuda, mudzi waDavidi yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe.
ZVAKAZARURWA 5:6 Zvino ndikavona pakati pechigaro chovushe nezvisikwa zvipenyu zvina, napakati pavakuru Gwaiana rimire, rakaita sarakabaiwa, rinenyanga nomwe nameso manomwe, iri mweya minomwe yaMwari, yakatumwa kunyika yose.
Rudzi rwaJuda nemureza wavo weshumba waigarodzikwa kumabvazuva kwetabernekari. Waitarisana nezuva richibuda apo rinounza chiedza kuzuva idzva. Izvi zvinomiririra Jesu seChiedza chenyika akauya kuzova nzira yekuenda Kudenga.
NUMERI 2:2 Vana vaIsraeri vanofanira kudzika matente avo, mumwe nomumwe pamureza wovokwake, nezviratidzo zvedzimba dzemadzibaba avo; vanofanira kudzika matente avo vakatarisana netente rokusongana vakarikomba.
3 Vanodzika kurutivi rwamabvazuva, nokunobuda zuva nako, vanofanira kuva vomireza yemisasa yaJuda, namapoka avo;
Saka kurutivi rwemabvazuva kwaive nemureza une mufananidzo weshumba yaJuda.
Pavaifamba,Juda nemureza wake ndivo vaienda mberi.
Vana vaIsraeri vaigarotevera Shumba yaJuda. MaKristu anofanira kudzidza chidzidzo chikuru kubva pane izvi.
NUMERI 10:14 Pakutanga mureza weboka ravana vaJuda wakasumuka namapoka avo,
Kubva pane izvi tinodzidza kuti tinofanira kutevera Jesu. Chero zvinorehwa neBhaibheri, tinofanira kuzvitevera nekuti Jesu Ndiye Shoko raMwari.
Tinobva tazouya kune mimwe mireza mitatu inomiririra kutadza nezvivi zvehutungamiriri hwevanhu.
GENESISI 49:3 Rubeni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu , nokutanga kwesimba rangu, vukuru bwokukudzwa novukuru bwesimba;
4 Unotutuma semvura, haungavi novukuru, nokuti wakakwira kuvuvato bwababa vako, ukabwusvibisa; wakakwira kumubeda wangu
Munhu oga ndiye anokwanisa kuva nesarudzo dzekuita zvaanoda. Isu vanhu takaberekwa muzvivi nekudaro hupenyu husingagumi haukwanisi kupananwa kupfurikidza bonde.
Mureza wemunhu uri kurutivi rwekumusoro waive muyeuchidzo unogara uripo wechivi chebonde, kutadza kukuru kwemunhu. Rubeni akarasikirwa nehudangwe hwake nekuda kweizvi.
Munhu akasikwa sechisikwa chaMwari chakanakisa. Asi simba rake rekuzvisarudzira ndiro rakamuparadza.
Zviitiko zvebonde zvaparadza hutungamiriri hwevanhu mukati menhorondo.
Jakobo aive nevakadzi vaviri, Rea naRakeri. Saka Rubeni, mwanakomana waRea wekutanga, akarasikirwa nehudangwe hwake hwaive chiratidzo chakasimba chehutungamiriri, hudangwe hwakazoenda kuna Josefa sezvo aive dangwe raRakeri. Izvi zvakapa Josefa zvigaro zviviri saka akazotsiviwa nevanakomana vake vaviri Efraimi naManase. Kupfurikidza vanakomana vake, Josefa akaita nzvimbo dzemarudzi maviri muIsraeri. Saka hudangwe hwakazobva kunaJosefa kuenda kuna Efraemi.
Hudangwe hwaive chiratidzo chesimba rehutungamiriri hwakasimba, hwaibva kuna baba kuenda kumwanakomana wavo.
Kune vanhu vanoita zvekurima, chipfuyo chakasimbisisa chaive nzombe. Nzombe ine simba guru uye inokwanisa kushanda zuva rese. Ichi chiratidzo chinodadisa chemutungamiriri akasimba anozvipira.
Chiratidzo chenzombe chaitsanangurwa semhuru. Pavaifamba, Juda aienda pekutanga Efraimi otevera. Mhuru yaigarira pedyo nedanga, ichitevera gwara rimwechete uye yaisazorasika. Mufananidzo wakanaka pakutevera shumba yerudzi rwaJuda, Shoko.
Asi mhuru inoziva zvinhu zvishoma kwazvo uye inopererwa kana ikarasika kana yaenda kwayo yega. Kuva nehudangwe kwakaita kuti Efraimi ave mutungamiriri akasimba wemamwe marudzi, asi ndokunge achitevera Juda chete.
Munhu anoda kudya, saka varimi vakakosha. Simba guru renzombe raive chinhu chakakosha pakuitwa kwechikafu.
DEUTERONOMIO 25:4 Usasunga muromo wenzombe inopura zviyo.
ZVIREVO 14:4 Kana pasinenzombe, chidyiro hachine chiro; asi zvibereko zvizhinji zvinouya nesimba renzombe.
Efraimi aive nechinzvimbo chehudangwe kubva kuna baba vake Josefa. Chipo chikuru ichi chaimiririrwa nenzombe pamureza wake yaive mhuka yakasimbisisa yaibatsira murimi kuti pave nechikafu. Nzombe inoshanda nekuita chikafu chinotarisirwa nenyika yose.
Nzombe pamufanaidzo wemureza yaive mucherechedzo wehutungamiriri hwakasimba kurutivi rwevaIsraeri vaiita zvekurima.
Asi, sezviri pavatungamiriri vevanhu, kana vatungamiriri vakarasika ipapo nzombe inova mucherechedzo wekuuraiwa.
Pane nyama zhinji yakakosha panzombe. Kana ikange yakura zvekuti haichagone kushanda, muridzi anoiurayira nyama yayo.
Saka nzombe mucherechedzo wesimba, kushanda kunorwadza uye kubaiwa.
ZVIREVO 7:9 Nenguva yorubvunza vayeni, nenguva yamadeko ezuva, pakati povusiku kwasviba:
10 Zvino tarira, mukadzi akasongana naye, wakanga akafuka sechifeve, anokunyengedzera pamoyo.
ZVIREVO 7:22 Unomutevera pakarepo senzombe inoenda kwainonobaiwa,
ZVIREVO 7:27 Imba yake inzira dzinoenda Sheori, Dzinoburukira kudzimba dzorufu.
Marudzi gumi evaIsraeri paakabva kuna Juda kwakaita batawabata. Efraimi akanga akanganwa kuti simba ravo rakaita serenzombe rinobva kuna Mwari. Chiratidzo chavo chaive mhuru. Mhuru inoziva zvishoma kwazvo saka inofanira kutevera mutungamiri (Juda aive neTemberi). Kana mhuru ikafamba kuenda zvayo yega inorasika nekukasika. Efraimi akabva arasika nekukasika akanamata zvifananidzo.
Efraimi akarasika akanamata zvifananidzo hunova hupombwe pamweya.
HOSEA 4:17 Efraimi unonamatirana nezvifananidzo, muregei.
EZEKIERI 23:37 Nokuti wakafeva, ropa riri pamavoko avo; vakafeva nezvifananidzo zvavo;
Yambiro: Makereke eRoman Catholic akazara mifananidzo. MaKristu anotevera Shoko raMwari kana kuti anopedzisira asanganiswa muhupombwe hwemweya netsika dzemasangano nekereke yeCatholic amai mhombwe nevanasikana vayo vemasangano.
Nzombe kuna Ezekieri yaitsanangurwa zvakare semhuru kuna Zvakazarurwa ingava nzombe duku, semhuru yaive nekufanana nenzombe yayaizokura kuva.
MAPISAREMA 106:19 Vakaita mhuru paHorebi, vakanamata mufananidzo wakavumbwa.
20 Vakatsinhana saizvozvo kubwinya kwavo, Nomufananidzo wemombe inochera bundo.
EKSODO 32:8 Vakurumidza kutsauka panzira yandakavarayira, vakazviitira mhuru yakavumbwa, vakainamata, vakaibaira zvibayiro vachiti: Ndivo vamwari venyu, imi vaIsraeri, vakakubudisai munyika yeEgipita.
Mhuru yendarama yaive chiumbwa, chaive chakagadzirwa nemukuru wavo Aroni Mosesi asipo.
Mhuru iduku sezvo yararama kwenguva shoma kubva yazvarwa.
Saka mureza wemhuru chiratidzo chekuti vatendi vanorasiswa nekukasika zvakadii kubva paShoko raMwari nenguva duku, nevatungamiri vavo vezvitendero.
Vanhu vamwechete vakapururudza Jesu achipinda muJerusarema musi weSvondo yeMichindwe saMambo wemaJuda ndivo zvakare vakatenderana nevakuru vavo vezvitendero vakamurovera chishanu chakatevera.
Mureza wenzombe kana mhuru mucherechedzo wekukasika kurasika kunoita vanhu vanotungamirira muzvitendero.
EKSODO 32:3 Zvino vanhu vose vakagura zvindori zvendarama zvakanga zviri panzeve dzavo vakavuya nazvo kuna Aroni.
4 Iye akazvigamuchira pamavoko avo akazviveza nenhumbi yekuveza nayo, akaita nazvo mhuru yakavumbwa, Ivo vakati: Ndivo vamwari venyu imi vaIsraeri, vakakubudisai muIjipita.
NEHEMIA 9:18 Kunyange panguva yavakazviitira mhuru yakaumbwa, vachiti; Ndiye mwari wenyu wakakuburitsai paEgipita, vakakutsamwisai kwazvo,
Mhuru yechipegani yakaitwa nemupristi mukuru Aroni yaidaidzwa kuti Mwari (mumwe) uye vamwari (vakawanda).
Apa ndipo pane gwara rekutanga rechakavanzika chedzidziso yeTiriniti yekuBabironi yakapararira nekuEgipita apo chikwata chevamwari chaitsanagurwa chichinzi mwari umwechete. Uku kwaive kukanganisa kukuru kwaizoziviswa kuvanhu nevatungamiri nekufamba kwenguva.
Tiriniti yakaziviswa pakanzuru yeNicean muna 325 AD. Riri inzwi risimo muBhaibheri raimiririra chiKristu chichizvipa ronda guru apo ruzivo rwemagiriki rwakawanana nechiKristu zvikatorana netsika dzechipegani chekuBabironi totenda kubata kune simba kwehudzvanyiriri kwamambo Constantine. Akaisa shamhu yerufu kune avo vaisatenderana naye.
Tiriniti iyi yakaunza kusawirirana kukuru apo maKristu aiedza kubatanidza pfungwa yekuti mumwe- muvatatu uye vatatu-mumwe. Dzidziso yeTiriniti ndiyo dzidziso yekutanga yakatambirwa nemaKristu asi vachiziva kuti haisi muBhaibheri. Nekunge vagamuchira izvi “Jesu ndiye munhu wechipiri muhuMwari” pasina chinyorwa chinotaura izvi muBhaibheri, mukova wakazarurwa kuti vanhu vatende kune dzimwe dzidziso dzese dzaizotevera dzaive dzisiri muMagwaro dzaiuya mukereke. Vakashandura “Mwanakomana waMwari” (zviri muMagwaro) kuita “Mwari Mwanakomana” zvisiri muMagwaro chaive chinzvimbo chaNimrodi chekuBabironi “El-Bar”.
Munhu Jesu aive Mwanakomana waMwari. Mweya Mutsvene unoshamisa wairarama maAri waive Mwari. Muviri wake wenyama waive nemavambo saka waive usiri Mwari. Jesu aifanira kuva mubatanidzwa wavose Mwari nemunhu. Sechiedza mubatanidzwa wemafungu uye chinhu chinobatika zvinhu zviviri zvinopikisana.
Zvinhu zizhinji zvisimo muMagwaro zvakapinda mukereke yemaKristu ikarasika, zvinhu zvakaita seruzivo (nhorondo dzakachenjera) zvikatsiva zvinhu zvakanyorwa muBhaibheri.
Nhasi uno nemufaro tinodaidza mutungamiri wechitendero kuti Pope kana kuti Pontif kana kuti Baba Vatsvene tisina kana kubvunza kuti ndepapi Bhaibheri parinotaura nezvechinzvimbo ichi.
Munhu wese ana baba vekubereka kana vekurera. Asi tinoudzwa kuti tisadaidze munhu kuti baba vedu vemweya.
MATEO 23:9 Musaedza munhu uri panyika baba venyu.
EKSODO 32:35 JEHOVA akarova vanhu, nokuti vakanga vaita mhuru yakaitwa naAroni.
Aroni aive muprista mukuru. Mutungamiriri akakosha aive pachigaro chechipiri kubva panewekutanga. Akakurudzirwa nevanhu kuti avatungamirire vachirasika. Vaida kusateerera Mwari. Aroni akatora simba nekuvaitira zvavaida.
Mureza wemhuru unoyeuchidza vanhu kuti hutungamiriri hwevanhu muchitendero huri panjodzi yekutadza kukuru nekukanganisa.
Kukanganisa kwatinodzidziswa nevakuru vezvechitendero ndiko kunokonzeresa hosha dzatinotongwa nadzo naMwari.
Nyika inotambudzika nemafashamu emvura inonaya nenzara. Zviri pachena kuti Mwari ari kutiranga. Asi maKristu anoramba achiramba kutenda kuti vanodaro vakabatirira pazvinhu zvakaipa. Kune ndudzi dzemasangano anosvika 30 000 nhasi uno. Ese akasiyana asi ese achitenda kuti ane chokwadi chakazara uye haade chiro. Asi havangave nechokwadi vese.
MABASA AVAAPOSTORA 7:41 Zvino vakaita mhuru namazuva iwayo, vakauya nechibairo kuchifananidzo chavo, vakafarira mabasa amavoko avo.
Vanhu vakaita nzira dzavo dzekubatira Mwari. Havachada kuzviita nenzira yaMwari pachake. Vanofunga kuti Mwari achatambira mazano avo. Nhasi uno tinosarudza kereke pachinzvimbo cheBhaibheri. Tinoisa tsika nechinyakare chezvitendero zvedu pamusoro peShoko. Mazano edu akangwara atibvisa kubva paShoko raMwari.
Zvino kwaive nemureza wechina.
Uyu waive mureza wegondo, chiratidzo cherubatsiro kubva kudenga, rubatsiro runoshamisa rwemweya.
EKSODO 19:4 Makavona zvandakaitira vaEgipita, vuye kuti ndakakutakurai imwi pamapapiro egondo, ndikakusvitsai kwandiri.
Gondo chiratidzo cherubatsiro rwaMwari runosvika nekukasika nenzira inoshamisa sepaakazarura Gungwa Dzvuku kuti vana veIsraeri vayambuke uye kuvapa chekudya chemanna nemvura murenje.
NUMERI 2:25 Kurutivi rwokumusoro kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaDani, namapoka avo;
NUMERI 2:27 Rudzi rwaAsheri ndivo vanofanira kudzika kurutivi rwavo;
GENESISI 49:17 Dani uchava senyoka munzira, semvumbi mugwara, inoruma zvitsitsinho zvebhiza; kuti mutasvi waro awire pasi neshure.
Dani pachinzvimbo chekutevera Mwari nekubhururuka mudenga segondo, akapinda mukuita hupombwe pamweya nekuita mhuru yendarama saka akabva anyura kusvika pachidanho chenyoka nekuda kwekurasisa vanhu, zvimwechete nekurasiswa kwakaitwa Eva nenyoka.
Mureza uyu ndiwo yambiro yekupedzisira. Dani haana kuratidzira hunhu hwegondo. Akaparadzira hukasha hwechiva chine huturu kwazvo.
Dani mutungamiri wekumusoro, haana kubvira ayananiswa nerubatsiro runobva kudenga nevhesi remuBhaibheri (gondo) asi nesimba renyoka inoparadza inobva pasi. Izvi zvinomiririra kunyura kwakaita hutungamiri hwevanhu pasi pemureza wegondo rinobhururuka.
Gondo rinokwanisa kuparadza nyoka nekuisimudza mudenga nekuirega ichiwira pasi yopwanyika mabhonzo ayo pamambwe ari pasi. Mureza wegondo rinobhururuka unomiririra Mwari achitumira mutongo pamusoro paDani anoita hunhu sehwenyoka.
Ndiyani akaudza maJuda kuti vatuke Jesu aive asina mhosva muimba yekutonga ya Pirato? Vatungamiri vechitendero.
II MADZIMAMBO 10:29 Asi Jehu haana kurega kutevera zvivi zvaJeroboami mwanakomana waNebati, zvaakatadzisa Israeri nazvo, zvemhuru dzendarama dzaiva paBeti-eri, nedzaiva paDani.
Dani wakava musha wemhuru dzendarama dzakapinza Israeri pakunamata zvifananidzo uye muhutapwa nevaAsiria.
DEUTERONOMIO 28:47 Nokuti hauna kushumira Jehova Mwari wako nomufaro, nomoyo unofara, nokuda kwokuwanda kwezvose.
49 Jehova uchavuyisa rudzi runobva kure kuzorwa newe runobva kumagumisiro enyika, segondo rinobhururuka rudzi rwausinganzwisisi rurimi rwarwo;
Babironi ndirwo rudzi rwakatapa nekuita nhapwa vaIsraeri vaJuda. Vanhu vekuBabironi vari pasi paNebukadnezari vaive vakadzikama uye vari nesimba kwazvo segondo riri kubhururuka pavaiswedera vachiuya kuzorwadzisa maJuda.
Gondo rinomiririrawo kutonga kwaMwari pamusoro pevanhu vanoramba nzira yaMwari.
ZVIREVO 23:5 Unoda kuzviratidza nameso ako zvaenda? Nokuti zvirokwazvo fuma inozviitira mapapiro, segondo rinobhururuka kudenga.
Hezekia, mambo akanaka waJuda akatadza zvikuru paakaratidza fuma yake yese kuvanhu veBabironi paraive richiri guta duku. Babironi rakazokura rikafpuma uye rikaita simba kwazvo riri pasi paNebukadnezari akazouya kuzopamba nekutora fuma yese yeJerusarema. Kuzvisanganisa neBabironi kwakava kukanganisa kukuru kwakaitwa naHezekia kwakazoguma kwavaita nhapwa kuBabironi.
Gondo rinomiririra kurasikirwa nezvinhu nekukasika kunosangana nevakawanda vanovimba nepfuma yepasi pano isina kugadzikika.
Rangarirai, kereke mazuva edu ano rava bhizimisi guru panyika.
Jesu akatsamwa kwazvo paakadzinga vaitengesa muTemberi. Akaramba vanhu vanoita mari kubva muchitendero.
Nebukadnezari akaona chiumbwa chaive nemusoro wendarama kuhope dzake. Musoro waimiririra hupfumi hweBabironi. Vanhu vekuBabironi vaikoshesa kubudirira munezvemari nezvinhu zvaita nhasi kuti chiKristu chidzikire hwaro hwacho nekuda kwekushingirira pamharidzo yekubudirira. MaKristu nhasi uno anoda korona (muhoro) pasina muchinjiko (kutambudzika nekushingirira).
Jesu akataura makomborero pavarombo.
RUKA 6:20 Zvino akatarisa vadzidzi vake, akati: makaropafadzwa imi varombo nokuti vushe hwaMwari ndehwenyu.
Jesu haana kubvira ati “Makaropafadzwa imi vapfumi”. Akataura zvinopikisana neizvi.
RUKA 6:24 Asi mune nhamo imi vapfumi, nokuti mapiwa kunyaradzwa kwenyu.
Kutukwa kunotevera hutungamiriri hwakabudiririra ndiko kuzvikudza. “Ndiri mukuru” ndizvo zvinotaura vakabudirira.
ChiKristu chemakwikwi chinokura apo vanhu vanenge vachida kukundana pambiri pfuma nevakadzi sezvo maKristu anorambana nekurooranazve. Tisingataure vaya vanongorarama muzvivi.
Makaro anoratidzwa patinopfachura pfuma yedu kuti tifadze vamwe uye kuvaratidza kuti tiri nani uye takapfuma kupinda ivo.
JEREMIA 49:16 Kana kuri kutyisa kwako, kuzvikudza kwomoyo wako kwakakunyengera iwe ugere mumikaha yedombo, unozvisimbisa pakakwirira pazvikomo kunyange ukavaka dendere rako pakakwirira segondo, ndichakubvisa’ po ndizvo zvinotaura Jehova.
OBADIA 1:4 Kunyange mukabhururukira kumusoro segondo vuye kunyange dendere renyu rakaiswa pakati penyeredzi ndichakuwisirai’ po pasi ndizvo zvinotaura Jehova.
Gondo rinoratidzira kushaiwa basa kwekuzvisimudzira pamusoro-soro nepatinogona napo.
Asi nenguva yaMwari anoparadza hunhu hwedu hwevanhu hwekuzvikudza kusina maturo. Tarisai kuti hushe hwaive nesimba kwazvo munguva dzakadarika, nemasimba avo makuru, zvakatsakatika.
Hitler, mumwe wevatungamiri vaive nehutsinye kwazvo, akavimbisa kuti hushe hwake hweGerman, hwaizorarama kwemakore 1 000. Asi hwakangokunda kurarama kwemakore gumi nemaviri.
MARIRO AJEREMIA 4:19 Avo vakadzingana nesu, vakamhanyisa kupfuura makondo okudenga:
Kuranga kwaMwari kuchauya nekukasika kubva kudenga segondo.
Gondo rine maziso anoona zvinhu chero zvidiki-diki. Saka Mwari anoziva zvakanakisa kuti zvivi zvakaita sei zvakaitwa nevanhu. Hakuna chero chiro chakavanzika kubva kwaari.
Mwari akasimudza Russia neAmerica kuti dzikunde Hitler.
HOSEA 8:1 Isa hwamanda pamuromo wako, zvinovuya segondo kuzorwa neimba yaJehova, nokuti vakadarika sungano yangu nokutadzira murairo wangu.
Mureza wegondo. Unoreva kuti Jehova anoda kutibatsira nesimba rake rinoshamisa kubva kumusoro kudenga, asi kana tikafuratira Shoko rake (sezvakaitwa naDani) zvino gondo rinobva ramiririra kuranga kwakasimba kuchauyiswa kwatiri naMwari kubva kudenga, kusvikira vavengi vedu vatikurira, pfuma yedu isina kugadzikika inotorwa uye kukurirwa kunobva kwaita kuti kuzvikudza kwedu kuwisirwe pasi.
Mureza wegondo unomiririra muonero mukuru wemweya unopinza mukati mechokwadi kana kuti unomiririra kusvika nekukasika kwekutonga kwaMwari kuzorova zvivi zvedu nekusatenda muShoko apo maKristu akaponeswa paanopinda munguva yekutambudzika kukuru.
Kugamuchira chibairo chepaCalvari kunotiponesa kubva kugehena asi tinofanirawo kuti tizive chokwadi cheShoko raMwari kana tichida kudzivirira kupinda munguva yekutambudzika kukuru.
Saka pfungwa iyi inotangira kuna Genesisi yoramba ichidzokorora nenzira imwechete munzvimbo dzakasiyana siyana yozotambanudzwa kuna Zvakazarurwa.
Iyi ndiyo nzira yatingawane nayo chokwadi pamusoro pepfungwa yatinenge tiinayo.
Pfungwa iyi inozvidzokorora nekuramba ichidzokororwa muBhaibheri here?
Yakatangira kuna Genesisi ikanoperera kuna Zvakazarurwa here?